Otu esi etinye Slack na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Otu esi etinye Slack na Debian 11 Bullseye
September 27, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Slack dị ka ngwugwu .Deb
Otu esi ebido Slack
slack bụ otu n'ime usoro nzikọrịta ozi mmekọrịta kacha ewu ewu n'ụwa. Site na mmalite mmalite ya na 2013, ọ toro. A na-akwado ya ugbu a n'etiti otu mmepe na ụlọ ọrụ ijikọ ọtụtụ ọrụ, otu na-agba ọsọ, na nzukọ, na ihe ndị ọzọ. Ụzọ Slack si arụ ọrụ bụ ịmepụta ọwa maka otu gị, isiokwu, ndị ahịa, ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị. Slack na-egosipụtakwa oku olu na vidiyo, nkesa faịlụ.
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-ama ka esi etinye usoro nkwukọrịta Slack na Debian 11 Bullseye.
Iji wụnye Slack, ị ga-eme nke a site na nbudata Slack dị ka a .deb ngwugwu. Enwere ike ịkwado nke a n'etiti ndị mmepe na ndị ọrụ ike ebe ọ bụ na ngwugwu ọnyà na-eri ọtụtụ ọnụ ụlọ ma na-afụ ụfụ na mgbe mgbe na Debian ma e jiri ya tụnyere Ubuntu na nsogbu.
Ọtụtụ mgbe, ịwụnye ngwugwu .deb na Debian kwụ ọtọ; Otú ọ dị, n'oge a, ọ na-achọ ntakịrị ọrụ e nyere na Debian 11 Bullseye; ngwugwu "libappindicator3-1" dị naanị na Buster na Sid maka oge a. Ịwụnye nke a dịkwa mkpa maka ngwa ndị ọzọ dị ka Discord na ọtụtụ ndị ọzọ.
Nke mbụ, ị ga-edozi nsogbu ndabere nke ngwugwu ahụ "libappindicator3-1". Iji mee nke a, ị ga-achọ ibudata ngwugwu .deb maka Slack site na ịga na Slack ibe nbudata na ịnweta njikọ nbudata kachasị ọhụrụ, wee laghachi na njedebe gị wee budata ngwugwu ahụ.
Mara, ịnweta njikọ maka nbudata Slack nwere ike ịdị aghụghọ mgbe ụfọdụ. Nke kacha njọ bụ iji iwu dị n'elu, dochie nọmba na ụdị dị ugbu a, iji aka budata ya, wee gaa na nke gị. ndekọ nbudata iji rụọ ọrụ ọzọ.
Ugbu a, jiri iwu ihe atụ dpkg na-esonụ ka ịtọpụ:
dpkg-deb -x slack-desktop-4.19.2-amd64.deb unpack
dpkg-deb --control slack-desktop-4.19.2-amd64.deb
Rịba ama, dochie 4.19.2 na nọmba ọhụrụ n'ọdịnihu mgbe nsụgharị ndị ọzọ gafere nke a.
Na-esote, jiri ihe ndị a mv iwu:
Ugbu a, mepee faịlụ ahụ "./unpack/DEBIAN/control" ma wepu libappindicator3-1 ma were dochie ya libiyatana-appindicator3-1.
Chekwaa faịlụ (Ctrl + O), wee pụọ na faịlụ (CTRL+X).
Ugbu a wughachi faịlụ .deb, rịba ama na a ga-edegharị ya site na aha ngwugwu mbụ:
dpkg -b unpack slack-fixed.deb
Wụnye Slack, jide n'aka na ị na-agba ọsọ faịlụ .deb nke edoziri, ọ bụghị nke mbụ, ma ọ bụ na ị ga-alaghachi na square.
sudo apt install ./slack-fixed.deb
Na-esote, nyochaa nwụnye site na ịlele apt-cache amụma na Slack:
apt-cache policy slack
Site na nrụnye zuru oke, ị nwere ike ịgba Slack n'ụzọ dị iche iche. Nke mbụ, mgbe ịnọ na ọdụ Debian gị, ị nwere ike iji iwu a:
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ slack iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Agbanyeghị, nke a adịghị mma, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na desktọpụ Debian gị meghee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Slack. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ ị mepee Slack, ibe nbanye ya ga-ekele gị.
Ekele, ị tinyela Slack na Debian 11 Bullseye.
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala ịwụnye Slack na Debian 11 Bullseye site na iji ngwugwu .deb site na ibe nbudata Slack na ịwụnye ndabere site na ịbupu na ịkwanye ngwugwu ahụ. Maka ozi ndị ọzọ, ị nwere ike nyochaa wee mụtakwuo maka Slack site na ịga na ibe akwukwo.
N'ozuzu, Slack bụ nnukwu mmemme, otu n'ime ihe ndọghachi azụ, n'agbanyeghị, bụ ọnụ ahịa ya. Ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ Slack, yabụ Ọ bụrụ na ị nweta narị ole na ole ruo puku ole na ole, ọ na-aghọ ngwa ngwa ihe ndọghachi azụ, yabụ ihe kpatara na ị na-ahụ naanị ụlọ ọrụ na-eji ya wee kwụọ ụgwọ maka ikike. Ọtụtụ obere azụmaahịa na otu mmepe enweghị ike ịkwụ ụgwọ maka njirimara adịchaghị mma. Otú ọ dị, a ka nwere ike iji ya n'efu na-adị mfe ma ọ bụrụ na ịnakwere na-efunahụ ihe ole na ole.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, slack Mail igodo
Otu esi etinye onye ahịa IRC ezumike na Debian 11 Bullseye
Otu esi etinye Discord na Debian 11 Bullseye
1 echiche na "Otu esi etinye Slack na Debian 11 Bullseye"
November 10, 2021 na 12: 49 am
Ị na nkume! Daalụ.
Ọtụtụ ihe ngwọta ruru unyi dị na gburugburu, na-etinye ngwugwu a kwụsịrị na bullseye, mana ngwọta gị ka mma.